Author Topic: အမောပြေဟာသမှတ်စု (Read 499761 times)
« Reply #430 on: June 18, 2011, 05:12:08 PM »
မိမိကိုယ်မိမိ စပါးစေ့ဟု ထင်နေသော စိတ်ဝေဒနာရှင် တစ်ယောက် စိတ်ရောဂါ
အထူးကု ဆေးရုံသို့ ရောက်လာသည်။
လအနည်းငယ်ကြာ ကုသမှု ခံယူပြီးနောက် မိမိကိုယ်မိမိ လူဖြစ်သည်ဟု
ဆင်းခွင့်ပေးလိုက်သည်။ သို့သော် ဆေးရုံမှ ထွက်ပြီး မိနစ်ပိုင်းအတွင်း
ကြောက်လန့်တကြားဖြင့် ဆေးရုံထဲငှင်းပြန်ပြေးဝင်လာသည်။ ဆရာဝန်ကမေးသည်။
“လမ်းပေါ်မှာ ကြက်တွေ တွေ့လို့ဗျ”
“အဲဒါ ဘာဖြစ်လဲ၊ ခင်ဗျား ဘာကို ကြောက်စရာလိုလဲ အခုခင်ဗျားဟာ လူဖြစ်တယ်
စပါးစေ့ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ခင်ဗျားသိနေတာပဲ”
“ဒါပေမဲ့ ကြက်တွေ အဲဒါကို မသိဘူးခင်ဗျ”
ရောဂါကြီးသဖြင့် လုံးဝ မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့သော လူနာအဖြစ် ဆရာဝန်များ
ယောက်ျား။ ။”မင်း ငါ့အပေါ် တစ်သက်လုံး သစ္စာစောင့်ခဲ့တဲ့ မိန်းမ
ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဘယ်လိုလိုပဲဖြစ်ဖြစ် ငါမသေခင် အမှန်ကို
မှန်မှန်ပြောပါ။ ငါ့ကိုမင်း သစ္စာ ဖောက်ခဲ့ဖူးသလား”
မိန်းမ။ ။”မတော်တဆ ရှင်မသေရင် ဘယ့်နှယ် လုပ်မလဲ”
« Reply #431 on: June 18, 2011, 05:27:27 PM »
ဘုန်းတော်ကြီး ။ ။ မင်းနတ်ပြည်သွားချင်သလား..
ပထမလူ ။ ။ သွားချင်ပါတယ်…
ဘုန်းတော်ကြီး ။ ။ဒါဆို ဒီဘက်မှာလာရပ်ချေ..
ဘုန်းတော်ကြီး ။ ။ မင်းရောနတ်ပြည်သွားမလား…
ဒုတိယလူ ။ ။ သွားချင်ပါတယ်. ဖာသာ..
ဘုန်းတော်ကြီး ။ ။ ဒါဆိုမင်းလည်းဒီဘက်လာရပ်…
ဘုန်းတော်ကြီး ။ ။ မင်းရော နတ်ပြည်လိုက်မယ်မလား….
တတိယလူ ။ ။ ဟင့်အင်း..
ဘုန်းတော်ကြီး ။ ။ ဘာဖြစ်လို့တုန်း… မင်းသေရင်နတ်ပြည်မရောက်ချင်ဘူးလားကွ…
တတိယလူ ။ ။ အော်သေမှလား ကျွန်တော်ကအခုချက်ချင်းသွားဖို့လူစုနေတာမှတ်လို့.
« Last Edit: June 20, 2011, 09:18:34 AM by tunaye2011 »
« Reply #432 on: June 18, 2011, 05:28:50 PM »
ပြီးခဲတဲ့အားလပ်ရပ်မှာကျွန်တော်လည်း ပြတိုက်သို့သွားလေ့လာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒိုင်နိုဆောအရိုးစုများပြသသောနေရာအရောက်တွင် Tyrannosaurus (T Rex) အရိုးစုတစ်ခုအားကြည့်ရင်း နဘေးမှ ပြတိုက်ဝန်ထမ်းအားမေးလိုက်မိသည်။
ကျွန်ပ် ။ ။ ဒီအကောင်ကြီးတွေ ရဲ့သက်တမ်းဘယ်လောက်များရှိသွားပလဲဗျ
၀န်ထမ်း ။ ။ နှစ်ပေါင်း ၆၅သန်း၊ နှစ်နှစ်၊ လေးလ နဲ့ ၂၈ရက်ရှိပြီဗျ…
ကျွန်ပ် ။ ။ ဘာလို့ဒီလောက်တောင်အတိအကျပြောနိုင်ရတာလဲ
၀န်ထမ်း ။ ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်နဲ့လေးလ ကျော်က ကျွန်တော်အလုပ်ဝင်တုန်းက ဒီကောင်ကြီးတွေ သက်တမ်းက ၆၅သန်းလေ… ဒီလောက်တော့အသာလေးရှိပြီပေါ့ဗျာ….တဲ့
ချစ်သူနှစ်ယောက် အလွန်သာယာသော လယ်ကွင်းပြင်သို့ လက်တွဲ၍ လမ်းလျှောက်လာကြသည်။
လမ်းတွင် နွားမကြီးက နွားကလေးလေးအား နမ်းနေသည်ကို တွေ့ကြသောအခါ ကောင်လေးက ကောင်မလေးအား ပြောလိုက်သည်
“အချစ်ရယ် ကြည့်စမ်း ဟိုမှာ နွားမကြီးက နွားကလေးကို နမ်းနေတာ ဘယ်လောက် အားကျစရာကောင်းလဲ ကိုယ်လဲ အဲ့လိုနမ်းချင်လိုက်တာ”
ကောင်မလေးပြန်ပြောလိုက်သည်မှာ “မောင် နမ်းချင် သွားနမ်းလေ ချစ် ဒီကစောင့်နေမယ်”
« Reply #433 on: June 18, 2011, 05:31:00 PM »
စီအိုင်အေသည် လက်မရွံလူသတ်သမား အတွက်လူရွေးချယ်လျှက်ရှိသည်။ နောက်ခံကိုယ်ရေးရာဇ၀င်များ၊ အင်တာဗျူးများနှင့် စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပြီးနောက် ဇကာတင်အဖြစ်သုံးယောက်ထွက်ပေါ်လာသည်။ အမျိုးသားနှစ်ဦးနှင့် အမျိူးသမီးတစ်ဦးဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးစစ်ဆေးမှုအနေဖြင့် တစ်ဦးချင်းကို သထ္တုခန်းမကျယ်တစ်ခုဆီသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီး သေနတ်တစ်လက်ပေးလေ၏။
အရာရှိ ။ ။” မင်းတို့ဘယ်လိုအခြေအနေနဲ့ပဲကြုံကြုံအားလုံးအမိန့်ကိုလိုက်နာရမယ်ဆိုတာသိတယ်မဟုတ်လား, ဒီအခန်းထဲမှာမင်းရဲ့မိန်းမ ထိုင်ခုံတလုံးပေါ်မှာထိုင်နေလိမ့်မယ် သူ့ကိုပစ်သတ်လိုက် ”
ပထမယောင်္ကျား ။ ။ ” ခင်ဗျားဘာတွေလာပြောနေတာလဲ. ကျုပ်မိန်းမကိုတော့မသတ်နိုင်ဘူး။ ”
အရာရှိ ။ ။ “ဒါဆိုမင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။”
ဒုတိယောက်ျားအလှည့်တွင်လည်းအလားတူအမိန့်ပေးလေသည်။ ဒုတိယလူလည်း သေနတ်ယူကာအခန်းတွင်းသို့ဝင်လေသည်။ ငါးမိနစ်ခန့်ငြိမ်သက်သွားပြီးနောက်… မျက်ရည်တွဲလဲဖြင့်ပြန်ထွက်လာလေသည်။
ဒုတိယယောက်ျား ။ ။ “ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးပြီဗျာ… ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိန်းမကိုတော့မသတ်ရက်ဘူး”
အရာရှိ ။ ။ “ဒါဆိုမင်းမှာလဲလိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းမရှိဘူး.. မင်းမိန်းမကိုခေါ်ပြီးပြန်တော့”
အမျိုးသမီးလည်း သေနတ်ယူကာအခန်းတွင်းသို့ဝင်လေသည်။ ထိုနောက် သေနတ်ပစ်ခတ်သံများတချက်ပြီးတချက်ကြားရလေသည်။ ၎င်းနောက် အော်ဟစ်သံများ၊ ကွဲရှသံများနှင့် နံရံကိုထုနှက်သံများကိုကြားရလေသည်။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်တိတ်ဆိတ်သွားပြီး တံခါးကိုဖြေးညှင်းစွာပွင့်သွားပြီးအမျိုးသမီးထွက်လာလေသည်။နဖူးပေါ်မှချွေးများကိုသုတ်လိုက်ပြီးနောက် ပြောလိုက်ပါ သည်။
« Reply #434 on: June 18, 2011, 05:34:28 PM »
ခါးပိုက်နှိုက်တစ်ဦးသည်တရားရုံးတွင် အပြစ်ရှိကြောင်းထင်ရှား၍ ထောင်ဒဏ် ၈လ (သို့) ဒေါ်လာ ၂၀၀ဒဏ်ဆောင်ရန်တရားသူကြီးမှအမိန့်ချလေသည်။ တရားခံရှေ့နေသည် ၎င်း၏အမှုသည်မှာ ဒဏ်ငွေမပေးနိုင်မှန်းသိသဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းလျှောက်ထားလေသည်။
“တရားသူကြီးခင်ဗျား… ကျွန်တော်၏အမှုသည်မှာ ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၅၀သာဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူကို့လူတွေကြားမှာမိနစ်အနည်းငယ်နေခွင့်ပြုရင်တော့ ဒေါ်လာ ၂၀၀ တတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်….”
ပယမလူ၊ ၊ ဟေ့ မင်း မိန်းမ မယူသေးဘူးလား
ဒုတိယလူ၊ ။ မစဉ်းစားရဲသေးပါဘူးကွာ၊
ဒုတိယလူ၊ ။နေစရာအိမ်မှ မဝယ်နိုင်သေးတာ၊
ပထမလူ၊ ။ဟာ……ဒါများဘာခက်တာမှတ်လို့၊ ယူပြီးယောက္ခမအိမ်ပေါ် တက်နေလိုက်၊ နောက်မှ စုဆောင်းပြိးကိယ့်ဟာကိုယ် အိမ်ခွဲဆင်းကြပေါ့၊
ဒုတိယလူ၊ ။ အဲဒါ ခက်တာပေါ့၊ ငါတက်နေမယ့် ယောက္ခမတွေတောင် သူတို့ရဲ့ယောက္ခအိမ်မှခုထိကပ်နေကြတုန်းမို.လို.ပါ။
ကိုမြ။ ။ ဟာ…..ကိုလှပါလား၊ အတော်ပဲဗျို့၊ ခင်ဗျားဟိုတစ်နေ့က ကျုပ်ဆီက ငှားသွားတဲ့ ဖောင်တိန်လေးပြန်လိုချင်လို့၊
ကိုလှ၊ ။ အယ်……ဒုက္ခပဲ၊ အဲဒီဖောင်တိန်ကို ကျနော် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ခဏဆိုပြီး ထပ်ငှားသွားတယ်ဗျ၊ ခင်ဗျားကအခုချက်ချင်းပြန်ယူချင်လို့လား၊
ကိုမြ၊ ။ ကျနော် က ပြန်မယူချင်ပါဘူး၊ ခုအဲဒီဖောင်တိန်ပိုင်ရှင်က ကျနော်ကို လာတောင်းနေလို့ပါ၊
« Reply #435 on: June 18, 2011, 05:38:07 PM »
( ၁ )ယောက်မှာကမြင်း(၁)ကောင်ရှိပြီးကျန်(၁)ယောက်မှာကလှေတစင်းရှိတယ်…
« Reply #436 on: June 18, 2011, 05:48:19 PM »
ထောက်ဒဏ်၁၂နှစ် ကျခံနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ထောင်ထဲမှာ ပျင်းနေခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့မှာ လူစကားကို နားလည်တဲ့ ပုရွတ်ဆိတ်တစ်ကောင်ကို သူတွေ့ခဲ့တယ်။ လူစကားကို နားလည်တဲ့ ပုရွတ်ဆိတ်ကို ကင်းမြီးကောက်ထောင်ခိုင်း၊ နောက်ဂျွမ်းပစ်ခိုင်း.. စတာတွေ လေ့ကျင့်ပေးပြီး အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်နေခဲ့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ထောင်ထွက်တဲ့နေ့မှာပဲ သူလေ့…ကျင့်ထားတဲ့ ပုရွတ်ဆိတ်ကို ကြွားချင်လွန်းလို့ လူစည်ကားတဲ့ အရက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို သူသွားခဲ့တယ်။
အရက်တစ်ခွက်မှာပြီး အင်္ကျီအိတ်ထဲက ပုရွတ်ဆိတ်ကို ထုတ်ပြီး ခုန်ပေါ်တင်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ စားပွဲထိုးကို ” ဒီပုရွတ်ဆိတ်ကို ကြည့်စမ်း” လို့ ပြောလိုက်တယ်။
စားပွဲထိုးက ပုရွတ်ဆိတ်ကို လက်ဖဝါးနဲ့ ချက်ချင်းရိုက်ချလိုက်ပြီး အားတုန့်အားနာနဲ့ ” ဆောရီးနော်..ကျွန်တော် နောက်တစ်ခွက် ချက်ချင်းလဲပေးမယ်” ။
« Last Edit: June 20, 2011, 09:24:59 AM by tunaye2011 »
« Reply #437 on: June 18, 2011, 05:53:46 PM »
” ဟေ့.. ဘွိုင် မင်းတို. ကြက်က ခြေထောက်တစ်ဖက်
“လူကြီးမင်း က တွဲကမှာလား ၊စားမှာလား ခင်ဗျာ…။”
« Last Edit: June 20, 2011, 09:24:31 AM by tunaye2011 »
« Reply #438 on: June 18, 2011, 05:59:20 PM »
“ဘာ!!!!…ရေ………ဟုတ်လား…. ?.ဘာလုပ်ဖို့လဲဟင် ဘာလုပ်ဖို့လဲ”
« Reply #439 on: June 18, 2011, 06:13:47 PM »
ကျမ ပေါက်က ကျင်းနေတာ …………….
ပခုက္ကူဘက်က မြို့လေးတွေ နာမည်တစ်လုံးစီပဲရှိတာ သိမှာပေါ့ ။ ပခုက္ကူကနေမြောက်ဘက်တက်သွားရင် ပေါက် ၊ မြိုင် ၊ ကျင်း အဲလို
တစ်လုံးတည်းမြို့တွေ အများကြီးပဲ ။ ဘတ်စ်ကားတွေလဲပြေးတယ် ။တစ်ခါတော့……စကားဝဲတဲ့ အဖွါးကြီးတစ်ယောက် ကားပေါ်တက်လာတယ် ။
ခဏကြာတော့ စပယ်ယာက မေးတယ် ။ ဘယ်မှာနေလို့ ဘယ်ဆင်းမတုန်းတဲ့။ဇာတ်ဆရာလေသံနဲ့ …..။ အဖွါးကြီးကလဲ စကားမြန်တယ်။
သူပြောချင်တာက………… ကျမ ပေါက်မှာနေတယ် ။ ခုတော့ ကျင်းမြို့မှာ
နေတာကြာပြီ ။ ရှေ့နားကျရင် ဆင်းမယ် ချပေးလို့ ပြောတာစကားကမြန်တော့ …..
ကျမ ပေါက်က ကျင်းနေတာ ကြာပြီ ။ ရှေ့နားကျ ချပေး။